Budada Dhibaatada Biyaha
Kiniiniga & Bolus
Xarumaha Xannaanada xoolaha
Powder for mudis
Dawada Dhaqanka Shiinaha
Ciraminta Sallate Gentamycin
Lilaxdhowrka Dhiiga Maskaxda leh ee loo yaqaan 'Lincomycin HCL
Halabuurka: 7.0g kasta wuxuu ka kooban yahay: Iincomycin (sida milixda hydrochloride) …………… 350mg Qaaliye (xayeesiin) ……………………………………… .7.0g Sharaxaad: Caddaan ama ku dhowaad caddaan cayrin saliideysan. Antibiyootiga loo yaqaan 'lincosamide antibiyootig' Waxaa badanaa loo isticmaalaa in looga hortago bakteeriyada-gram-ka bakteeriyada iyo saameynta mycoplasma iyo qaar ka mid ah bakteeriyada-gram-xun, halka ay saameyn xoog leh ku leedahay staphylococcus, streptococcus hemolyticus iyo pneumococcus. Waxay kaloo leedahay xannibaadda loo yaqaan "anaerobion" sida "Clostridium tetani" iyo "bacillus perfringens" waana dr ...
Isku-daridda Penicillin Intramammary Infusion
Soo bandhigid: Isku-darka isku-darka "procaine penicillin g inflation" waa xaddiga dhiiga galka leh ee ka kooban 5g kasta oo miskaha ah 'Procaine penicillin g' …………… .100,000iu Streptomycin sulphate …………………… .100mg Neomycin sulphate ………………… …… ..100mg Horudhac ah ……………………………… 10mg Qaamuus (xayeysiis) ……… R ...
Cloxacillin Benzathine Faleebo Dhiig Karka (Cow qalalan)
Halabuurka: 10mil walba wuxuu ka kooban yahay: Cloxacillin (sida cloxacillin benzathine) ……… .500mg Qaatalaha (xayeesiin ah) ……………………………………… 10ml Sharaxaad: Cloxacillin benzathine intramammary int infaksammary lo'da qalalan waa badeecad siisa firfircoonida bakteeriyada looga hortago bakteeriyada-gram-positive. Wakiilka firfircoon, cloxacillin benzathine, waa cusbo sifeyn u jilcan oo penicillin semisynthetic ah, cloxacillin ah. cloxacillin waa astaamo laga helo 6-aminopenicillanic acid, oo markaa kimikal ahaan waxay la xiriirtaa kuwa kale ...
Cloxacillin Benzathine Xaydha Indhaha
Halabuurka: cirbadaha 5g kasta wuxuu ka kooban yahay 16.7% w / w Cloxacillin (sida cloxacillin benzathine 21.3% w / w) oo u dhiganta 835mg cloxacillin. Tilmaanta: CUDURKA DHEXE waa cadar indhaha ka ilaalinaya fardaha, lo'da, idaha, eeyaha iyo bisadaha ay ku jiraan cloxacillin.It waxaa loo arkaa in lagu daaweeyo caabuqyada indhaha ku dhaca lo'da, idaha, fardo, eeyaha iyo bisadaha ay sababaan staphylococcus spp iyo Bacillus spp. Tilmaamaha: XANUUNKA CUDURKA Isha EE indhaha waxaa lagu muujiyey daaweynta caabuqyada indhaha ee lo'da, idaha, fardo, eeyaha ...
Halabuurka: 10 ml oo kasta waxay ka kooban tahay: Ceftiofur (oo ah milixda hydrochloride) ……… 500mg Qaadhaan bixiye ………………………………… qs Sharaxaad: Ceftiofur waa antibiyootiga cephalosporin ballaaran oo muujiya saameyntiisa iyadoo la xakameynayo bakteeriyada iskuxirka darbiga unugga. sida wakiilada kale ee dawooyinka lidka-lactam-ka, dawada cephalosporins waxay joojisaa isku-darka unugyada unugyada iyadoo la faragalinayo enzymes-ka muhiimka u ah isku-darka peptidoglycan. Saameyntani waxay dhalisaa ka fiirsashada unugyada bakteeriyada iyo xisaabinta natur-ka bakteeriyada ...
Halabuurka: 10 ml oo kasta waxay ka kooban tahay: Ceftiofur (oo ah milixda hydrochloride) ……… 125mg Qaaliye (xayeysiiye) …………………………… 10ml Sharaxaad: Ceftiofur waa antibiyootiga daawada cephalosporin-ballaadhan oo daawadiisa Saamaynaya adoo joojinaya isku-darka unugyada bakteeriyada. sida wakiilada kale ee dawooyinka lidka-lactam-ka, dawada cephalosporins waxay joojisaa isku-darka unugyada unugyada iyadoo la faragalinayo enzymes-ka muhiimka u ah isku-darka peptidoglycan. Saameyntani waxay keenaysaa in lagu ogaado unugyada bakteeriyada iyo Xisaabaadka bakteeriyada ...
Ampicillin iyo Cloxacillin Faleebo Dhiigxinjirow
Halabuurka: 5g kasta wuxuu ka kooban yahay: Ampicillin (sida trihydrate) ……………………………………… .. ………………………… 200mg qaali (xayeysiis) ……………………………………… R ...
Maamulaha iibka waaxda caalamiga ah: Ray Yang
Bishii Juun 20-22 Kooxda Jizhong waxay ka qaybgaleen VIV ...
Luulyo 20, 2016